Indlu enamaplanga kwilali yasePaseky
Proseč, Pardubice Region, Czechia
I-cottage esanda kwakhiwa enesiqingatha esinesiqingatha kwidolophana yasePaseky kufuphi neProseč isisiseko esifanelekileyo kwiintsapho ezinabantwana abathanda indalo kunye nezilwanyana, kodwa kunye nabathandi bokuzonwabisa okusebenzayo.
Kummandla we-cottage kukho iindlela ezininzi zokuhamba kunye neendlela zebhayisikili eziza kukuthatha kwindawo enhle yamatye e-sandstone kunye nemigodi yendalo yolondolozo lwendalo iToulovcovy maštale okanye iintlambo ezinzulu zepaki yendalo iKrounky kunye neNovohradky.
I-cottage inesakhiwo esikhulu esaneleyo esibiyelwe kunye nezihlalo zangaphandle, apho kukho imbono efanelekileyo ye-sandpit kunye nendlu yomthi. Ke uya kuhlala unabantwana bakho emehlweni ngexesha le-barbecue yangokuhlwa. Esi siqwenga sinequla kunye nedlelo elincinci leegusha, esele likhangele phambili kuwe. Itafile yeping pong iyafumaneka kwi barn ephangaleleyo.